Showing posts with the label प्रसङ्गतरङ्ग
तरकारी व्यवसायीको आन्दोलन यथावत, लोकल तरकारी सस्तो बाहिरको महँगियो
प्रस, वीरगंज, २० कात्तिक/ घण्टाघर नजिक पार्क क्षेत्रबाट नगरपालिकाले हटाउने भएपछि शुरु भएको वीरगंज तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी सङ्घको आन्दोलन आज दोस्रो दिन पनि जारी रहयो । व्यवसायीहरू तरकारी बजार बन्द गरेर सोही स्थानमा धर्ना बसेका थिए । व्यवसायी र वीउमनापाबीच आज भएको वार्ता कुनै टु·ोमा पुग्न सकेन । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीको रोहबरमा उनकै कार्यकक्षमा भएको छलफल तथा वार्तामा व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूले पार्कबाट यतिकै नहट्ने, हट्नै परे पायक पर्ने स्थानमा नगरपालिकाले बजारघर स्थापना गरिदिनुपर्ने अडान राखेका थिए । वीउमनपाका प्रतिनिधिहरूले भने केही महिनाभित्रै निर्माणाधीन मीनाबजार कमप्लेक्स तयार हुने र स्थायी बजार व्यवस्था हुने भएकोले तत्काल अन्यत्र बजार निर्माण गर्न नगरपालिकाले खर्च नगर्ने बताए । तत्काल केही समयको लागि पुरानो बसपार्कमा तरकारी बजार सञ्चालन गर्न सकिने नगरपालिका पक्षको तर्क थियो । छलफल तथा वार्तामा वीउमनपाको तर्फबाट अधिकृत विजय ड·ोल र तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी सङ्घबाट अध्यक्ष विदुर गुप्ताले नेतृत्व गरेका थिए । छलफलका लागि पुन: बस्ने सहमति भएको व्
मतदातासँग उम्मेदवार र उम्मेदवारसँग उद्योगी–व्यापारी परेशान
–कुमार रुपाखेती नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जन्छ’ । द्वितीय संविधानसभा निर्वाचन जति जति नजिकिंदो छ त्यतित्यति उम्मेदवारहरूको गरम गोजी नरम हुन थालेको छ । निर्वाचनको अन्तिम प्रहरलाई नेपालमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यो अन्तिम प्रहरको छोटो समय उम्मेदवारहरूका लागि खर्चालु हुने गर्दछ । यो बेला पैसाको खुबै चलखेल हुन्छ, सङ्क्षेपमा भन्ने हो भने भोट किनाकिन र बेचबिखन हुने गर्दछ । सबैलाई थाहै छ, आफ्नो उपस्थिति देखाउन मात्र थुप्रै दलहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने गर्छन् । आफ्नो उपस्थिति देखाउनेहरू पनि आर्थिकरूपमा खस्ताहाल हुने गर्दछन्, जतिसुकै मितव्ययिता अपनाउँछु भने पनि मतदाताहरू ‘ले दही रे दही’ गरी हाल्छन् रे । सबैलाई थाहै छ, गत संविधानसभा निर्वाचन कसैले सोच्दै नसोचेको, कल्पना नै नगरेको करिमाले जितिन् । ‘अगुल्टोले तर्सेकाहरू बिजुली देख्दा तर्सिन्छन्’ भनेभैंm पर्सा १ मा कुनै पनि उम्मेदवारहरू ढुक्क छैनन् । ढुक्क नहुनु नै पैसाको खति हो । आजकल त गुन्डाको मेठ, समूहका मेठ, मतदाताहरूका मेठ जताततै भेटिन्छन् । यस्ता मेठहरू अचेल उम्मेदवारहरूको घरआँगनमा ढिलोचाँडो रातिसम्म ओहरदोहर
–कुमार रुपाखेती आफ्नै पार्टीसँग लडाइँ गरी बल्लबल्ल टिकट पाएका संविधानसभा निर्वाचनका उम्मेदवारहरूलाई भ्याइनभ्याइ छ । टिकट फुत्काएर पनि चुनाव जित्न ‘फलामको च्युरा’ चपाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पर्सा क्षेत्र नं. १ मा पचासभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरू मैदानमा छन् । जसमध्ये धेरैको ‘लोटियागोल’ भइसकेको छ । त्यत्तिकै पनि पर्सा क्षेत्र नं. १ को चुनावी प्रतिस्पर्धा त्यसै पनि चर्चित र चर्चामा रहन्छ । किनभने यहाँ आचारसंहिता उम्मेदवार र पार्टीले मात्र नभई बेसरोकारवालाहरूले समेत उल्लङ्घन गर्ने गरेका छन् । यहाँ उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा हाकाहाकी आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्दै कर्मचारी, पत्रकार, सङ्घसंस्थाका सदस्यहरू तथा सार्वजनिक पदमा आसीन रहेकाहरू घुमिरहेका देखिन्छन् । बिहान चिया कफी हाउसमा गफिने यिनीहरू बेलुकीपख मदिरालयमा बकम्फुसे कुरा गर्दै मध्यरात पारिदिन्छन् । कसैकसैले त कार्यालय र आफ्नो लेखहरूमा समेत खुलेआम पक्षपातपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गर्दछन् । आफ्नो कार्यालयमा समेत चुनावी प्रचारप्रसार गर्नेहरूको यहाँ कुनै कमी छैन । अनि आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्दै साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरी
थरीथरीका मतदाता थरीथरीका समस्या
–कुमार रुपाखेती मुलुक अहिले पुरजोर संविधानसभा निर्वाचनमा होमिएको छ । उम्मेदवारहरूलाई खाने, बस्ने, सुत्नेसमेत ठेगान छैन । चाडपर्व सकिएकोले मतदाता र उम्मेदवार सबै फुर्सदिला भएका छन् । भोट कसलाई दिने र कसरी जित्ने भन्ने चटारो मतदाता र उम्मेदवार दुवैलाई छ । यस्तै चुनावी टेन्सनबीच कतिपय क्षेत्रमा चुनाव प्रचारका रमाइला प्रयास र दृश्यहरूसमेत देखिएका छन् । झापा क्षेत्र नं. १ ज·ली हात्ती प्रभावित एरिया हो । यहा बर्सेनि ज·ली हात्ती आतड्ढबाट दर्जनौं स्थानीय बासिन्दाले ज्यान गुमाउँछन् । त्यसैले सबै दलका उम्मेदवारहरूले आफ्नो पहिलो र प्रमुख एजेन्डामा यस क्षेत्रलाई ज·ली हात्तीको उत्पातबाट मुक्ति दिलाउने कुरा पूरै जोरशोरले उठाएका छन् । कसैले हात्ती आतड्ढमुक्त एरिया त कसैले हात्ती आतड्ढबाट ज्यान गुमाएकाहरूको फोटो संसद्भित्र प्रदर्शन गर्ने बताएका छन् त कसैले ज·ली हात्ती भारततर्फबाट प्रवेश गर्ने गरेकाले हात्ती पस्ने भारतीय नाकामा तारबार लगाउने आश्वासन दिएका छन् । त्यस्तै चितवन जिल्लाभरि चुनाव लागे पनि यहाँको माडी क्षेत्रका जनता ज·लबाट आउने बाघ, भालुबाट आतड्ढित छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्